Fitsarana momba ny kaonty: Nanoloran’ny USAID fitaovan-kajimirindra sy serasera hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka
dimanche, 18 juillet 2021 14:20
Nanolotra fitaovan-kajimirindra sy fifandraisan-davitra ho an’ny Minisiteran'ny Fitsarana ny governemanta amerikana, amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID), hanatsarana ny fitantanana ao amin’ny Fitsarana momba ny kaonty sy hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka.
"Ny fanatsarana ny fitantanana ny firaketan-tsoratra no ahafahan’ny Fitsarana miantoka fa ny vokatry ny fanadihadiana, ny tatitra ary ny didim-pitsarana dia azo ampiasaina amin’ny fanapahan-kevitra mikasika ny fitantanana sy ny politika," hoy ny Tale Jeneralin’ny USAID John Dunlop.
"Ny andrim-panjakana avo mahaleo tena sy mahavita tena, dia singa iray lehibe amin'ny fitantanana ara-demokratika".
Ny Fitsarana momba ny Kaonty dia ratsamangaikan'ny andrim-panjakana eto Madagasikara, miandraikitra ny fanaraha-maso sy fitsarana ny fandaniam-bolam-panjakana rehetra, ary koa manao tombana ny vola lany sy nampiasain'ny mpanantanteraka araka ny teti-bola notapahan'ny Parlemanta.
Ireo fitaovana ireo, izay ahitana solosaina, finday sy fitaovam-pifandraisan-davitra, dia hanatsara ny rafi-pitantanana ny firaketana ao amin’ny Fitsarana sy ny fahafahan'ny Fitsarana miasa eny ifotony, mifandray amin'ireo Tribonaly ara-bola isam-paritra, ary mizara traikefa sy fomba fanao tsara amin'ireo andrimpanjakana mpanara-maso manerana an'i Afrika sy ny firenen-kafa.
Ny fitaovana, miaraka amin'ny fanampiana ara-teknika mitohy avy amin'ny USAID, France, Maroc ary Norvège, dia manampy ny Fitsarana momba ny kaonty hanao fanaraha-maso amin'ny fomba mahomby kokoa, hanatsara ny mangaraharaha eo anivon'ny governemanta sy ny fandraisan'anjaran'ny olom-pirenena amin'ny asan'ny governemanta.
Nandritra ny lanonana dia nanambara ny filohan'ny Fitsarana momba ny Kaonty eto Madagasikara, Atoa Rakotondramihamina Jean de Dieu fa : "Ny fahafahan'ny Fitsarana momba ny kaonty manao asa eny ifotony dia ilaina mba hiantohana ny fahatsapan'ny olom-pirenena tsirairay fa misy mihaino izy ireo".